Izifiso ezinhle ngomhla ka-8 kuMashi kuya kumama, ugogo, udadewabo, othisha, intombi, osebenza nabo - Abafisa ukuhalalisela abesifazane besimemezelo, izinkondlo, i-prose
NgoMashi 8 usuku olumlando womlando. Eminyakeni engu-106 eyedlule eNgqungqutheleni Yesibili Yezenhlalakahle Zomphakathi, isishoshovu uClara Zetkin sabiza ukusekwa kosuku "lochwepheshe" kubo bonke abesifazane. Lo mkhosi wawuhluke kakhulu kulokho esasikujwayele. Esikhundleni sezinhlobonhlobo zezimbali zasentwasahlobo nezindumiso ezimnandi ezivela emadodeni, ubulili obuhle babenomzabalazo onzima wokulingana. Amantombazane, abesifazane kanye nogogo bathatha emigwaqeni futhi bazama ngazo zonke izindlela ukuthi banakekele izinkinga ezikhona. Phakathi neminyaka, umqondo weholide ushintshile kakhulu. Manje iSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni wonke seluyindlela yokubonakaliswa kwentwasahlobo, ukufudumala nokuzwela. Izimfanelo zakhe ezingenakulinganiswa izipho eziphathekayo, ukuhalalisela amahle kanye nezifiso zamagama ngo-8 Mashi ngo-sms, ivesi ne-prose abesifazane abathandekayo: omama, ugogo, odade, intombi, osebenza nabo, othisha.
Izifiso ezinhle ngoMashi 8 kulabo besifazane evesini
Isipho esithandwa kakhulu soSuku lwabesifazane lwaMazwe ngamazwe seluhlale lukhona, luyoba futhi luyoba yisigqila sezimbali ezikhanyayo nezimnandi. Zifanele ikakhulukazi ezinsukwini zokuqala zonyaka osuke ulindelwe, lapho abesifazane bekhathele ubusika obanda kakhulu balindele izimpawu ezimbalwa zokuvuswa kwemvelo ekuphileni okusha. Kodwa-ke, ngisho nezimbali ezithandekayo kufanele zenziwe yizifiso ezinhle zowesifazane ngo-Mashi 8: evesini, kuma-sms, emigqeni ye-prosaic. Ubuqotho abukho ifomu eliqondile! Ukube nje kuphela amazwi okuthokoza agcwele incazelo enomusa futhi ekhanyayo. Futhi kulabo abafuna izifiso ezinhle ngabesifazane ngo-Mashi 8 evesini, senze ukhetho oluncane: Sifisa usuku lomama lukhukhula Beba ngumkami nomama wezinto ezinhle kakhulu! Amadoda athembekile, anamandla njengodonga, i-Blossom njengenhlanzi engapheli!
Ngifisa sengathi uMashi oshonile
8 Mashi. Usuku lwentwasahlobo. Usuku lwama-fairy tale nature! Vumela wena kuphela amaphupho ogoli awedlule iminyaka. Uhlobo olufanayo oluhle luhlale njalo, Luhle oluhle ukuhlala! Vumela ubuhle buqhakaze. Futhi kaningi ukumomotheka empilweni yakho!
Ukuzijabulisa Kwezokugubha Ngohlelo luka-Mashi 8 lwabesifazane
NgoMashi 8 yisikhathi esingcono kakhulu sokutshela owesifazane ngento ebaluleke kakhulu: esinye isigamu ukukhumbuza uthando lwakhe, ozakwabo ukuveza inhlonipho, umama nogogo ukubonga ngokunakekelwa, indodakazi ukunikeza ukufudumala okukhulu, nentombi - ukuzethemba. Kodwa-ke, ukunikeza izifiso zeholide kwabesifazane ngo-Mashi 8 akulula, ngisho nangokwesekela. Phela, ukuhalaliswa okhethiwe nokuncoma kufanele kube okuqotho kakhulu. Ukuze kungabangeli ngisho nokuhlanganyela kokungabaza ebuqiniso babo. Futhi uma ungaqiniseki emakhono akho okukhuluma, sebenzisa izifiso zethu zeholide ku-prose ngo-Mashi 8 ngabesifazane. Othandekayo, omnene, abesifazane abathandekayo! Masivumele lolu suku, ngo-Mashi 8, nginikeza isimo sengqondo esihle, ukugcwaliseka kwazo zonke izifiso ezifihliwe! Masibe yisiqalo sokuqala okusha, okuzoletha injabulo kuphela! Ukuncoma okuqotho kanye namazwi anomusa njalo! Iholide elihle lentwasahlobo!
Ngicela ngikuhalalisele ngeholide lentwasahlobo, ubuhle nothando - kusukela ngo-8 kuMashi! Kwangathi umphefumulo wakho ungagcwaliswa ebusweni ngokukhanya, ukufudumala nenjabulo ezifisweni eziqotho, izimbali zethenda, izipho ezimnandi! Vumela ama-swallows akha izitshalo phezu kwamafasitela akho futhi alethe ukuchuma nokuqonda okuphakathi endlini, futhi imisebe yokuqala yelanga lokusazisa izokhomba indlela ejabulisayo ekugcineni kwakho!
Ngiyashesha ukuhalalisela ngoMashi 8 owesifazane othakazelisayo, othakazelisayo nowenhle ngempela! Vumela iholidi lekhefu lifike ngesipho sayo esihle kakhulu ngesimo sengqondo esihle, injabulo nokuvuselela okungokomoya. Kulolu suku kubalulekile ukufisa kuphela ukuhlanzeka, uthando lweqiniso, ukwethembeka futhi, empeleni, impilo enhle kakhulu.
Ukuhlakanipha nokuhalalisela ezinkondlweni ngo-Mashi 8, umama
Ukukhetha ukuhalalisela nokufisa amavesi kumama wakho othandekayo ngo-Mashi 8, ungayeki ngamazwi amancane okubonga impilo enikeziwe. Kukhona inani elingenakubalwa lemisho emihle, efanelekayo kumuntu wesilisa. Ukuqala nokuthinta, okuhlaziyekayo futhi okunene, okunomusa futhi "okukhazimulayo" - bonke baveza kahle izinhloso zakho. Ukuhlakanipha nokuhalalisela emavesini ngoMashi 8, umama angafaka kanyekanye kokubili ukuncoma okungokwemvelo, kanye nezikhalo zazo zonke izibusiso eziphezulu. Kuhlala kuphela ukukhetha okukhethwa kukho okuhle kakhulu futhi ubeke imali kuyo umphefumulo wakho. Ngosuku lwabesifazane, ngizoqala ukuhalalisela ngokuyinhloko: Yini ebaluleke kakhulu emhlabeni kunokuxhumana nomama wakho? Native, ngifisa sengathi konke okuhle kuwe Tsarit vumela injabulo engenakulinganiswa ekugcineni! Jabula ngokwengeziwe kunokwenzeka! Ngaso sonke isikhathi vumela izingane zingakhathazeki, Uhlala enjabulweni iminyaka eminingi, Umthombo wami wangunaphakade wokufudumala nothando!
Ukukhanya kwamazulu emagumbini e-lily elimhlophe kubonakala ngosuku olushisayo. Umama wethu, wena unamandla kunabo bonke! Ububele bakho nokuhlakanipha kukho konke! Ukufudumala ukukhathalela nokuthandana, Uphuthuma ekusizeni ngesikhathi esibucayi. Ukusula izinyembezi zakhe Ngokuvame ukubuka amehlo. Ngenhliziyo yakho uyasamukela, Unomfudumalo omkhulu wendabuko. Nguwe kuphela, umama kuphela, wazi ukuthi umcibisholo usuphilisa kanjani ukuphila kwethu. Vumela impilo yakho ikhule insimu ekhanyayo Futhi ubale inyoni emhlophe yonyaka. Uhlala nathi njalo, useduze, Wena nelanga! Futhi ukukhanya! Futhi inkanyezi!
Ayikho leyo mbali emhlabeni, Ngingakufanisa nani. Wena unomoya omncane futhi ulula, Wena ubuthakathaka bobesifazane namandla! Edilini elimangalisayo lobuhle Futhi ukuvuswa kwemvelo Waba ngisho nakakhulu Futhi awunayo iminyaka phezu kwakho! Mamula, iqhwa lizoqhaqhazela futhi iqhwa elivela ebusweni bomhlaba liyophela, Umphefumulo uzozizwa indiza Futhi uzovuselelwa ngengoma yokukhala!
Izifiso ezingcono kakhulu kumama ekusetshenzisweni kweSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke
Abesifazane abagcini nje ukujabulela ukuncoma. Badla amazwi amahle, njengezimbali zelanga nemisebe yamazolo. Ngaphezu kwalokho, wonke umama, umkakhe nendodakazi bayazi ukuthi bangabonga kanjani izifiso ezinhle. Sebenzisa wonke amathuba ukujabulisa izihlobo nabesifazane abasondelene, ukhethe ngokucophelela izipho, ugqozi, uphathe usesho lwemibingelelo yeholide. Phela, izifiso ezingcono kakhulu zomama ekuhlalweni kweSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke luhlobo lokuthandana, olutshala imali emntwaneni iminyaka eminingi. Ngifuna ukunyakaza kwentwasahlobo ngosuku luka-Mashi 8 ukuze kube ngukukhanya nokuphefumulelwe, njengokungathi ngisemncane. Ngifisa sengathi isimo sengqondo ngaso sonke isikhathi siphumelele, futhi ukuphila kuyakhazimula! Mamula, izimbali futhi iphunga njengentwasahlobo!
Umama! Ngomhla ka-Mashi 8 Ngifisa imibono emihle, amaphupho agqamile, imiphumela yangempela, isikhwama esigcwele, inhliziyo enhle nezimbali ezinhle ezivela kubathandekayo. Futhi makube njalo kuze kube phakade!
Vumela ngomhla ka-8 ka-Mashi futhi njalo emphefumulweni emphefumulweni kuyoba nomoya omuhle we-spring okhuthaza, wenza ukuphila kube kuhle nakakhulu, futhi, okubaluleke kakhulu, kuyashukumisela!
Izifiso eziqotho ngoMashi 8 ugogo evesini
Kulula ukuthola ukubingelela okuphelele kumama noma intombi. Kwanele ukuveza imizwa eqotho, usebenzisa imiyalezo yamagic e-epithets kanye nezifanekiselo. Kunzima kakhulu ukukhetha izifiso zenhliziyo yakho ngamavesi kagogo ngo-Mashi 8. Nguye lowo, kusukela ekuphakameni kwempilo yakhe, angakwazi ukubiza kalula intengo yangempela kuzo zonke izimpahla zabantu ezilula. Ugogo akakwazi ukunqoba izifiso zemali enkulu noma ukumomotheka kwenhlanhla. Ngifisa ugogo wakho ngoMashi 8 impilo enamandla, ukuthula kwengqondo, ukuthula nokuthula endlini. Mkhulu ugogo, ilanga efasiteleni, ngithulile kakhulu kuwe, kuhle! Nginithatha injabulo entendeni yesandla sami, Njengoba kuzoqhubeka isikhathi eside! Ngosuku lwemifula kanye nesimo sezulu sentwasahlobo, Ngomomotheka womusa kanye nolwandle lwezimbali! Vumela iminyaka ingakhathazeki - Ungumuntu omuhle kunazo zonke, ngiyavuma ukulungele!
Ngo-Mashi kuneholide ekhethekile, Uma kungekho ifu esibhakabhakeni. Ukuhlakanipha kuningi kakhulu Kukhona kunogogo kusuka kumzukulu. I-pies ubhake enkazimulweni, angizange ngidle okunjalo. Futhi njengowe ngakwesokudla ngangilokhu ngifuna nje. Usuku Lwabesifazane Ojabulayo, othandekayo wami! Ugogo, wena impilo Ngenhliziyo yami yonke ngifisa wena Ngomusa nangothando.
Ugogo ngithandekayo, Mnandi futhi mnandi! Ngosuku lweSwitzerland, ngifisa sengathi ujabule! Vumela impilo ibe namandla, Injabulo - enkulu, Imihlangano nabathandekayo - abavamile, Kodwa impilo - enhle!
Izifiso ezinhle uMgogo ngo-Mashi 8 emigqeni ye-prosaic
Futhi uma nganoma yisiphi isizathu umhlangano womuntu siqu wokuphuza itiye ophuzile nezingxoxo ezithandako akunakwenzeka, bhalela ugogo wakho incwadi. Masibe kuphela imigqa ye-prose enezifiso ezinhle kuMkhulu ngo-Mashi 8. Qinisekisa ukuthi, umuntu onokuhlangenwe nakho kokuphila, ubiza izikhathi ezingaphezu kwamakhulu kunezimbali eziluhlaza, amakhadi akhanyayo nezipho ezingenasici. Ngosuku lobudlova nobuhle, ngo-Mashi 8, ngifisa sengathi ukuvumelana nenjabulo kubusa enhliziyweni, ngoba bagcwalisa amehlo abesifazane abakhanyayo, ubuhle - umzimba kanye nobubele - umphefumulo.
Ugogo, othandekayo ngoMashi 8! Leliholide likhanya kakhulu, lifudumala, lihlaba iphunga lezimbali nezimbali ezintsha. Ngelinye igama - usuku lwentwasahlobo. Ngifisa sengathi uhlale unomswakama emphefumulweni wakho.
Eholidini elihle nelesifazane elimangalisayo likaMashi, yamukela izifiso zomphefumulo we-springness lightness nokukhanya okulula! Vumela injabulo yansuku zonke iphendule ikhanda lakho futhi umangaze umcabango wakho!
Uhlakaniphile odadewethu abathandekayo eholidini likaMashi 8
Ngokwesiko, akukhona nje amadoda, amadodana namadoda akanye nawo ashesha ukuhalalisela abesifazane babo eSuku Lwabesifazane LwaseMhlabeni Wonke. Wonke umzalwane onothando ufuna ukuveza izifiso ezinhle emavesini udadewabo eholidini likaMashi 8. Futhi ukuthi amagama anomusa awazange azwakale angabonakali noma angenakuqhathaniswa, afunde kusengaphambili, ubhalise izinkondlo zokuqala zeholide kuma-postcards noma nge-sms. Kwezinye izimo, imikhonzo yokukhuluma ihlanganiswa izipho ezithandekayo, ukuphatha okumnandi noma izimbali zentwasahlobo. Kodwa ngisho nezifiso zodade wakho othandekayo eholidini likaMashi 8 ngokuqinisekile zizokwaziswa. Kudadewethu ngoMarta Wesishiyagalolunye Ngifisa okuhle kunakho konke: Ukuphumelela emsebenzini wokuqala, Ngothando, ebhizinisini, ukuze kube nokuphakama. Ungalahleki, ngiyakuncenga, ngezinsuku zamasonto, Ukuzikhethela kwakho. Ngiyazi: lokhu ngezinye izikhathi kunzima, Ukuzama kuyigugu kusuka kulokho. Namuhla, ngizokwamukela lowo obizwa ngokuthi udadewethu. Abantu abanjalo abavamile, angidingi omunye udadewethu.
Ngomhlaka lwesishiyagalombili ka-Mashi, inkatho yami! Okukude emhlabeni akukho dadewethu! Siyakuhalalisela ngobuqotho Wena ngobuqotho, ngomphefumulo, ngothando! Yiba njalo enhle kakhulu, Entsha, enempilo, efundela phambili! Vumela impilo yeLanga ikunike ukukhanya nesibhakabhaka, Abantu abathandekayo kuphela, izinsuku eziyizinkulungwane ezijabulisayo!
Usuku Lwabesifazane Ojabulayo, udade wegolide! Futhi amazwi ami ayobe elula: Vumela konke okusemandleni akho ukuthi kufezeke - Wonke amaphupho namaphupho omlingo! Ukuthi uthando lwalumnandi futhi luphakade, Daily ukuthi umphefumulo wahlabelela! Izifiso zami azipheli, Phatha, zivumele masinyane!
Amazwi ahalalisayo ngo-prose udadewethu ngo-Mashi 8
Ekuphileni kukhona njalo indawo yokwenza ngcono. Ukucabangela okuncane, ungabhala udadewabo ukuthokoza okutholile kunomlando. Ngezifiso ezihlekisayo, ukuhlambalaza okungenangqondo kanye nokukhuluma ngezikhathi eziqhakazile kusukela ebuntwaneni. Yebo, uma ubuhlobo bungasondelene kakhulu, noma usho ngamazwi akho, akukho lutho olwenziwe, sebenzisa ukukhethwa kwethu kwamazwi okuhalalisela ngomsekela odade wakho ngoMashi 8. Sithandwa sami, othandekayo wami! Ngiyashesha ukukuhalalisela ngosuku lwowesifazane futhi ngikubonga ngenhliziyo yonke ngokuba ngisempilo yami, ngoba ngaphandle kwakho bekuyoba yisithukuthezi futhi esisha. Ngifisa sengathi uhlezi kahle, kanye nokugcwaliseka kwezifiso nokuphumelela okuvelele ekufinyeleleni imigomo yakho! Ungcono kakhulu!
Ukulimaza ngoMashi 8 kusho ukuthi izimbali sezivele ziqala ukuhleleka okuhle. Ngifuna ukumamatheka kwakho kwelanga ukuze kukhule nabo. Vumela inhliziyo yakho imomotheka, igcwale ukukhanya nokufudumala ngofudumele. Abahluleli bemincintiswano yobuhle bayimpumputhe, ngoba kufanele ugqoke umqhele ngo-March 8 ngenzuzo yakho.
Ngiyabonga, othandekayo, ngothando lwakho lokuphila nokukholwa okuhle, ngokunikeza impilo, ukuqapha nokuyihlobisa. Ngikufisela impilo enhle, umoya omuhle, ukugcwaliseka kwezinhlelo zokuphila kanye nethemba! Injabulo kumndeni wethu wonke!
Ukufisa okuhle ngoMashi 8 intombazane evesini
Yini ongayifisa ngoMashi 8 umngane othandekayo? Injabulo nempilo? I-corny kakhulu. Impumelelo emsebenzini wakho kanye nokumamatheka kwenhlanhla? Hhayi ngobuqotho kakhulu. Indlela engcono kakhulu yokuveza ukunakekelwa nokuthandana kwakho ukunikela isifiso esihle intombazane ngoMashi 8 evesini. Vumela okuqukethwe kwayo kungeke kube ukukhohlisa noma ngokuphambene nalokho - kungavamile. Kwanele ukukhetha isifiso esifushane sokuthi umngane onenothi lokuhleka usulu kanye nokwabelana okuhlekisayo, ukuze kuholide ka-Mashi 8, amhlekise enkampanini enobungane. Akuwona wonke amaqhwa awa, Usuku lwethu selufikile - Mashi 8! Yaga ngayinye yashintsha, Ekushiseni kwentwasahlobo injabulo. Kodwa wena, intombazane-umngane, ngaphandle - Beauty ehlobo nobusika! Amadoda asenasindiso manje, Siya ukuzingela nawe!
Mngane othandekayo, onomusa, othembekile, ngomhla ka-8 Mashi ngifisa ukuba usheshe, Ukuze wenze iphupho lakho ligcwaliseke, ngizocela izingelosi. Kumyeni othandekayo ekuhluphekeni enhliziyweni, Ozinikezele izinkondlo, wanikeza izimbali, Ukuze injabulo ibe yilapho, okungukuthi, ngemuva komnyango, Futhi akukho zithiyo endleleni.
Intombi, ngomhla wesishiyagalombili ka-Mashi, ngifisa injabulo ukuthola! Ukuphikisana, injabulo, injabulo! Love, laugh and blossom! Makube khona umgwaqo olula, Endleleni yakho enhle! Futhi izinto eziningi ezinhle, Kuhlale kukhona okuthile nawe!
Izifiso ezijabulisayo ku-prose zezintombi ku-International Women's Day
Izintshisekelo ezinhle nezinhleko zezintombi kule holide ka-Mashi 8 zijabulela impumelelo enkulu. O, into, nabesifazane bathanda ukuphoqa. Futhi bayakwenza ngenjabulo enkulu. Noma kunjalo, ngokuqukethwe okufanayo, bona ngokwabo bathola izifiso zokuzilibazisa noma ngamazwi noma ngokubhala. Sithemba ukuthi ukubonga okuqoqwe ngezansi kuzojabulisa bonke abangani bakho: abasha nabadala, abaseduze futhi abangekho kakhulu. Ake ngikutshele: namuhla uthakazelisa! Ake ngithi ngaphezulu: namuhla akuyona into ehlukile! Ngaphandle kwemithetho nguwe! Hlala ufana njalo!
Othandekayo, uhle kakhulu, wena, njengentwasahlobo ngokwayo, ngithemba, kuzoba khona ihlobo elivuthayo nelishisayo, ekwindla efudumele, kodwa sizolahlekelwa ebusika! Hlala njalo, futhi ngizohlala nginani njalo! Siyakuhalalisela!
Ngifisa sengathi ububushathu obuhle kakhulu - Impumelelo, Uthando, Inhlanhla, ikuhambisane nawe njalo, hhayi nje kuphela ekuguleni kokugcoba nokugxila ezinambithekwaneni zasentwasahlobo zika-Mashi 8!
Izifiso ezifishane ezifingqiwe othisha ngoMashi 8
Usuku Lomhlaba Wonke Wabafazi esikoleni ngumkhosi okhethekile. Akumangalisi, ngoba iningi labafundisi - abameleli besigamu esihle somuntu. Futhi, okwamanje, bayakufanelekela ukuthokoza okukhulu. Abesifazane abahola izingane ngesandla sendlela enzima yesayensi yesikole abakwazi nje ukunikela ngezimbali kanye nebhokisi lamaswidi. Vumela ngisho okukhethekile kakhulu. Izifiso ezifishane ezimfushane ngo-Mashi 8 ngokuhambisana nombukiso kuzokuba yindlela enhle. Sihalalisela abesifazane ngeliholidi kanye nabathandekayo bethu Abathandekayo bethu abathandekayo, abalulekile, othandekayo, Tu, okusiholela ezindaweni eziphakeme kakhulu zoLwazi. Esifundweni esidingekayo. Ngokubili sizozuza ukunqoba okusha, umsebenzi wakho nenkazimulo kuyohlale ihlonishwa! Sifisela wena injabulo, impilo neminyaka eminingi yokuPhila.
Awusiye nje uthisha kithi, okusiletha eziningi ezitholayo, nawe uyena ohlakaniphe kakhulu kithi, uMfundisi Oqondisisa Kakhulu! Kuleli holide sifuna abesifazane bakuthande injabulo ngokungahambi kahle, Futhi vumela amehlo akho acacile, anomusa Ungalokothi ube nokuhlukumezeka!
Madoda nabathandekayo! Siyakuhalalisela ngo-Mashi wesishiyagalolunye! Ukuphila okulula, ngaphandle komgwaqo onzima, Kusuka esikoleni sonke ufisa ngobuqotho! Beka eceleni i-pointer Futhi wamukele izimbali, ufisa: Ukuze kube njengokungathi ngomlingo wezinganekwane, Njalo usuku lugcwaliseka ngokuthanda!
Siyakuhalalisela uthisha we-prose evela ekilasini nabazali ngeholide ka-Mashi 8
Ngokomlando, abazali bezingane zesikole bahalalisela othisha ngo-8 Mashi ngamunye ngonyaka. Ngesinye isikhathi ngabanye, ngezinye izikhathi - egameni lonke iklasi. Njengomnikelo, wonke umuntu ukhetha konke okuvela emasikweni angenasici kuya ezintweni ezijwayelekile zokuphila kwansuku zonke. Kodwa yini engaba yinhle kakhulu kunezingqayizivele ezimnandi zezinkondlo nezifiso? Yiqiniso, siyakuhalalisela uthisha nge-prose ngokubuyekezwa okunethezeka kwabazali namazwi okubonga evela kubantwana. Noma yimuphi uthisha ozelwe uzojabula ngalesi sipho seholide. Phela, ukuhlolwa okubaluleke kakhulu ekuphileni kuyindlela yokuhlola ngomgomo womsebenzi womuntu ngokubizwa. Vumela lolu suku lwentwasahlobo lumomotheka nxazonke, vumela wonke umuntu akubheke ngezindlebe zokubonga futhi, kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu emgwaqweni, vumela inhliziyo ibe yikhanyane futhi icace ekunakekeleni nasekuthandweni kwabangane, izihlobo nabathandekayo. Zizwa ngosuku luka-Mashi 8 wena ndlovukazi, futhi uhlale kuze kube phakade.
Vumela ngenhlanhla yemvelo, ukufika kwezinsuku ezifudumele ezisebusuku emiphefumulweni yakho ithemba lokuzalwa elihle lizalwa futhi imizwelo iphakama. Uthando futhi uthandeke!
Yonke into enhle owesifazane oyenayo - ubuhle, umusa, ububele, ukunakekela, ukuzwana, uthando - ukuvuthwa kuze kube iholidi lentwasahlobo, ukufudumala ngokumomotheka, izimbali nezipho ezinhle. Uhlala uhlukile kakhulu, kodwa kusukela kulokhu asikuthandi kakhulu. Uphuthelwa ubuhlungu bomunye umuntu ngokwakho, futhi njalo ulungele ukuza nokuvikela umhlaba wonke. Siyabonga ngomusa wakho nokunakekelwa kwakho, ngokuhlakanipha kwakho nokubekezela kwakho kwezingelosi, nangokusebenzela njengomthombo wokukhuthazwa kanye nemizwa ephakeme ngathi. With iholide entwasahlobo! Ukuthandana nokuchuma, impilo enhle nenhlanhla kukho konke!
Izifiso zangempela ngo-Mashi 8, ozakwabo ku-SMS
Ngokuvamile kunoma yikuphi ukusebenzisana okusebenzayo kuyisiko ukugubha izinsuku ezibalulekile: Usuku lokuzalwa, Unyaka Omusha, iholidi lomsebenzi oqeqeshiwe ... Usuku lwabesifazane lwaMazwe ngamazwe aluphinde luyeke. Kuleliholidi, ingxenye yesilisa yethimba izama ukukhombisa ubuhlakani bayo nobuciko bayo ukuhalalisela ozakwabo besifazane ngoMashi 8 ngendlela engcono kakhulu. Ngesikhathi esifanayo, izimbali zamaswidi nama-slogans amakhulu "wonke odongeni" ngokusobala zilahlekelwa ngokuqhathaniswa nezifiso zangempela ngo-Mashi 8 ozakwabo e-SMS. Ngezinye izikhathi kusukela ekufundzeni kuya emacaleni okunqoba, omunye ufuna ukuhleka futhi akhale ngesikhathi esifanayo. Futhi izinyembezi ngo-Mashi 8 - hhayi okukhethwa kukho. Ukuze uvimbele izigameko ezingaphezu kwenhlangano yentwasahlobo ehloniphekile ngo-Mashi 8, kungcono ukusebenzisa izifanekiso ezenziwe ngomumo zezifiso zangempela zozakwethu. Stichok ngobuqotho abazinikezele abangane bakhe ejabulisayo, ngifisa: vumela iqabane corporate kube mnandi! Izimangaliso zika-Mashi 8 Akukho okubi kakhulu kunonyaka omusha! Sizohleka, sidansa, Futhi kusasa kuyoba - njenganamuhla: Ukumomotheka, amazwi anomusa Futhi ungaphazamisi ikhanda!
Siyakuhalalisela uSuku lwabesifazane, ngakho konke okuhambayo kuhamba endleleni, Ukuthi abantwana bangalimazi, Ngakho abayeni bakho bahlabelele izingoma! Ngakho ukuthi njalo wawumnandi, Ngakho konke kwahamba kahle ebhizinisini, Injabulo, injabulo nenhlanhla, Siyakuhalalisela ngoMashi 8!
Kusukela emsebenzini wezintombi ziphumule, Nastal yiyona enhle kunazo zonke izinsuku! Musa ukugijimela ezikhungweni ezivuthayo, Ungabhidliza amahhashi ekuhambeni! Singuwe namhlanje, sibubula futhi sizisola, Kusukela emsebenzini kuya kusasa, sizokukhulula kakade! Ekuseni kusuka ebuhleni bakho obuhle, Uthando nenjabulo ufisa sifuna!
Izifiso ezingavamile nabangavamile kubasebenzi abasemthethweni ngo-Mashi 8
Uma kungenalo ithuba lokuhalalisela abasebenzi abayigugu ngesikhathi seholide entwasahlobo ngaphakathi, thumele i-SMS ehlelekile ngezifiso ezingavamile ngoMashi 8. Mhlawumbe imigqa yakho ngeke ibe yinto evelele kakhulu futhi ayikhohlwa, kodwa ngokuqinisekile iyophakamisa isimo sengqondo kumakheli. Ungakhohlwa ukubhalisa. Isigijimi esingenangqondo asikho isizathu esenza kube nemizwelo emihle. Ngeholide elihle kakhulu labesifazane laBeautiful, Spring and Love! Ngalolu suku oluhle, ngingathanda ukufisa: umuzwa omuhle kakhulu wezindaba ezijabulisayo, ukuzondla okujabulisayo - kusuka othandweni olulodwa, ukuphefumula - kusuka enjabulweni nokumangala okukhulu - kusukela ekugcwalisekeni kwezifiso!
Abesifazane abathandekayo nabanhle, siyanihalalisela ngoMashi 8! Ngomhlaka 8 ka-Mashi sifisa wena izinto eziyisishiyagalombili zamakhosikazi, izinto ezibalulekile kakhulu: ukuthula emndenini, ukuthula emphefumulweni, impilo emzimbeni, injabulo emehlweni, uthando enhliziyweni, ukukhanya emilenzeni, amazwi amnandi ezindlebeni zakho nezimbali ezinhle ezandleni zakho!
Spring kuyinto isikhathi esihle kunazo zonke nemilingo yonyaka. Sibheke ukuqala kwentwasahlobo enomphefumulo wokungapheli okwedlulele, hhayi injabulo echazwayo. Amaqhwa ebusika nezinqamu zeqhwa ziphelela embonweni owodwa wezintaba zikaMashi zasebusuku. Iholidi lentwasahlobo lifanekisela ukuvuswa kwemvelo, ukuqala kwenkathi entsha neqhakazile, lapho ngamunye wabo anethemba lokuthi kuzoshintsha izinguquko ezinhle ekuphileni. Iholide elijabulisayo, besifazane abathandekayo! Siyabonga kuwe, siyazi ukuthi intwasahlobo ibukeka kanjani! Bonke abesifazane bahluke ngokuphelele! Kodwa ngokuthanda izipho, izimbali, ukuncoma kanye namazwi amnandi - okufanayo okufanayo. Iholide lesentwasahlobo ngo-Mashi 8, njengokungathi idalwe ukuqinisekisa ukuthi ummeli ngamunye wezocansi ezamukelekile wathola ukuhalalisela ngokugcwele. Umama, udadewabo, ugogo, intombi, ozakwabo nabothisha - bonke ngaphandle kokufanelwe izifiso ezinhle ngoMashi 8 ema-sms, izinkondlo noma i-prose. Thatha isikhathi sokuzikhethela, engeza amagama akho bese uhlobisa ngendlela engcono kakhulu.
Perfume Yabafazi Abashisekayo
USergey Zhigunov waba ngumkhulu
Umqondo we-fibrosis nezindlela zokwelapha
Amakhukhi we-ginger we-chocolate
Imidlalo engcono kakhulu yebhodi
Indlela yokuhlanganisa ukudla?
Ukubuyiselwa kwezinwele ezimele